Lego Ideas Black Friday သဘောတူညီချက် ၂၀၂၁ Brick Fanatics
Lego Ideas Black Friday သည် ၂၀၂၁ ဖြစ်သည်
Black ကသောကြာနေ့ ထောင့်တစ်ဝိုက်တွင်ရှိပြီး၊ ယခုနှစ်တွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် အနည်းဆုံး သုံးမျိုးအတွက် အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော လျှော့စျေးအချို့ကို တွေ့နိုင်သည်။ Lego Ideas အစုံ။
နောက်ဆုံး LEGO Ideas Black Friday လျှော့စျေးများ
လောလောဆယ်တော့ တစ်ခုတည်းပဲ။ Ideas လျှော့စျေးသတ်မှတ်ထားသည်။ Zavvi is 21319 ဗဟို Perk။ ဤ Friends-inspired set သည် အလွန်ရေပန်းစားကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၎င်းကို ကောက်ယူရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစာမျက်နှာကို လျှော့စျေးအသစ်များဖြင့် နေ့တိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်နေမည်ဖြစ်သောကြောင့် မကြာမီ ပြန်ကြည့်ပါ။
21319 ဗဟို Perk - ယခု£ 64.99, £ 49.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
Argos သည် ယခုအချိန်တွင် Winnie the Pooh ကိုလည်း လျှော့စျေးရထားသည်။ အီးအတွက် TOYS20 ကုဒ်ကို သုံးကြည့်ပါ။xtra စျေးနှုန်းလျှော့ချ။
၂၁၃၂၆ Winnie the Pooh - ယခု£ 90.00, £ 60.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
Lego Ideas အနက်ရောင်သောကြာနေ့အထူးလျှော့စျေး
ထိုစဉ်တွင် Lego Group ၏ crowdsourced theme သည်ပုံမှန်အားဖြင့်စျေးလျှော့ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါ။ ၎င်း၏အစုံအများစုသည်သီးသန့်ဖြစ်သည် LEGO.com နှင့် Lego စတိုးဆိုင်များ (သို့) ရွေးချယ်ထားသောတတိယစာမျက်နှာ၌သာပေါ်လာလိမ့်မည်arty လက်လီရောင်းချသူများ - ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရံဖန်ရံခါကမ်းလှမ်းချက်အချို့ကိုတွေ့ဖူးတယ် Lego Ideas အစုံအပါအ ၀ င်နှစ်တွေတစ်လျှောက် 21319 ဗဟို Perk ဆရာဝန် ၂၁၃၀၄ ယောက်
ဆိုလိုသည်မှာ Lego Ideas Black ကသောကြာနေ့ အပေးအယူများသည် စားပွဲပေါ်တွင် လုံး၀မဟုတ်ပေ၊ လက်ရှိရရှိနိုင်သည့် ပမာဏထက် ပိုကြီးသောအကွာအဝေးဖြင့် LEGO.comပြေးလွှားနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ် 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း နှင့် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ သို့ 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော နှင့် 21318 သစ်ပင်အိမ်.
Lego Ideas Blacksmith Black Friday အပေးအယူများ
ဒီနှစ်မှာတော့ရဲ့ 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ရန်ဖြစ်ပါသည် Lego ဘာလဲ Castle 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ ရန် Lego ၂၀၂၀ တွင်ပင်လယ်ဓားပြများ၊ အခြေခံအားဖြင့်တစ် ဦး နှင့်ပတ်သက်သောအလွန်ကောင်းသောပွဲတစ်ခုဖြစ်သည် classic ခေတ်သစ် p ကို သုံး၍ ဆောင်ပုဒ်၊arts နှင့်နည်းစနစ်များသည်အခြေခံအားဖြင့်ထိုမူရင်းအစုံများအားလုံးထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ Clemens Fiedler ၏ဒီဇိုင်းသည်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုသို့ဘာသာပြန်ထားသည် Lego Ideas လောလောဆယ် စင်ပေါ်တင်ထားတာမို့ hot-ticket ပစ္စည်းရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ Black ကသောကြာနေ့.
ထိုအပင်လျှင် Lego Group သည်ချက်ချင်းလက်ငင်းလျှော့စျေးပေးရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ ဖြတ်. Lego VIP တနင်္ဂနွေ, Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့£134.99 / $149.99 / €149.99 set သည် အနည်းဆုံး p ကို ရရှိသင့်ဆဲဖြစ်သည်art (အားလုံးမဟုတ်လျှင်) ယခုနှစ်လက်ဆောင်များ ၀ ယ်ယူခြင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်နည်းလမ်း။
Lego Ideas Black Friday ၏ဒိုင်နိုဆောရုပ်ကြွင်းများ
21320 ဒိုင်နိုဆောကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း သုံးခုမြောက်တစ်ခုဖြစ်သည် Lego Ideas 2021 တွင် အနားယူရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ၎င်းကို ရယူရန် အချိန်အတော်ကြာရန် မလိုအပ်ပါ။ Black ကသောကြာနေ့ နောက်တစ်ခုမဖြစ်လာခင် paleontological set ကို ဖမ်းဆုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ Lego ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း၊ အငြိမ်းစားယူခြင်း-မကြာမီလျှော့စျေးအချို့နှင့်အတူမျှော်လင့်သည်။
Lego Ideas အငြိမ်းစားယူခြင်းအစုံသည် Black Friday လျှော့စျေး
အခြားနှစ်ခု Lego Ideas ဒီနှစ်ကုန်မှာစင်ပေါ်ကနေအစုံထွက်ခွာပါ 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော -၂၀၁၈ ၏ ၂၁၃၁၃ ကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေသည် တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော - နှင့် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ၊ ၎င်းတို့တွင်အငြင်းပွားစရာဖြစ်သည် Lego အုပ်စုထက် ကျော်လွန်၍ အချိန်တိုင်းတွင်အကြီးမြတ်ဆုံးအစုံ Ideas အစုစု။
ငါတို့ထံမှယူပါ၊ သင်အရာအားလုံးအတွက် 2-in-1 ကိုးကွယ်မှုကိုသင်လက်မလွတ်ချင်ပါ Lego ပင်လယ်ဓားပြများ၊ ဒါကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်ပေါ်လာမှာပါ LEGO.com - ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သည့် လအနည်းငယ်အတွင်း ခေတ္တပစ္စည်းပြတ်သွားသည် - ၎င်းသည် မတိုင်မီ ကျဆင်းသွားသည့်တိုင် တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်။ Black ကသောကြာနေ့. နို၀င်ဘာလအထိ ဆက်နေမယ်ဆိုရင် နှစ်ခုစလုံးက အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ နှင့် 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောလျှော့စျေးအချို့ကိုတွေ့နိုင်သည် LEGO.com.
ပိုပြီးအပေါ်များအတွက် Lego Black ကသောကြာနေ့, ထွက်ခွာသည် ငါတို့စာရင်း အကြောင်းအရာတစ်ခုစီတိုင်းနှင့်တစ်နှစ်တာ၏အကြီးမားဆုံးစျေးဝယ်ပွဲတစ်လျှောက်ကိုစူးစမ်းရှာဖွေပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီ page ကိုအကောင်းဆုံးစောင့်ကြည့်ပါ Lego Ideas သူတို့ကြေငြာသည့်အတိုင်းနှင့်အပေးအယူများ